Toyota Factory, Vatengi - China Toyota Manufacturers
Zvemota humburumbira musoro
Yakakwira Precision crankshaft yakakodzera RenaultR4
Yakakwira-mhando mota crankshaft yakakodzera RenaultE7J
Yakakwira-mhando mota Flywheel
Iyo yakazara yakazara yemotokari crankshafts Crankshaft
Yakakwira-mhando Cylinder musoro
Yakanaka mota crankshaft yeToyota3RZ
Mhando dzemotokari dzinoshanda: Toyota3RZ
Crankshaft ndiyo inonyanya kukosha muchinjini. Inomira nesimba rinopfuudzwa netsvimbo yekubatanidza uye inoishandura kuita torque kuburitsa kuburikidza necrankshaft uye inotyaira zvimwe zvishandiso painjini kushanda. Iyo crankshaft inoiswa kune iyo centrifugal simba reiyo inotenderera misa, iyo inogara ichichinja gasi inertial simba uye inodzosera inertial simba, izvo zvinoita kuti iyo crank kutakura iite pasi pekukombama uye torsional mitoro. Naizvozvo, crankshaft inodiwa kuti ive nesimba rakaringana uye kuomarara, uye pamusoro pejenari panoda kusashomeka, kushanda zvakaenzana, uye kuve nemwero wakanaka.
Icho chigadzirwa chakagadzirwa neepamusoro-simba ductile simbi uye yakaumbirwa simbi, uye inorapwa nepamusoro pekusimbisa tekinoroji kugadzirisa kuneta simba kweye crankshaft.Iyo inokodzera mota, ngarava, mainjiniya mota, zvekurima michina, jenareta set, yepakutanga mhando, nechitarisiko chakanaka, kukwirira kwakanyanya, kutsetseka, kupenya uye kusimba mushure mekupedza. Chigadzirwa chimwe nechimwe chakaedzwa zvakaomarara uye hunhu hwayo hwakavimbiswa. Bhokisi kurongedza rine chitarisiko chakanaka uye rakasimba kugadzirwa kutenderera: 20-30 mazuva ekushanda, kwazvakarerekera kurongedza / kwepakutanga kurongedza, nzira yekutakura: ivhu, gungwa nemhepo.
Yakajairika mota yemotokari crankshaft yeToyota2Y
Mhando dzemotokari dzinoshanda: Toyota2Y
Kuti udzikise huremu hwe crankshaft uye simba re centrifugal rinogadzirwa panguva yekufamba, iyo crankshaft magazini inowanzoitwa isina mhango. Makomba eOiri anoumbwa pane yega yega pepanhau kuti igadzirise kuiswa kana kuburitswa kwemafuta einjini kuzora nzvimbo yemagazini. Kuti udzikise kushushikana kwekushushikana, majoini eiyo huru magazini, crank pini uye crank ruoko zvese zvakabatana nekuchinja arc.
Icho chigadzirwa chakagadzirwa neepamusoro-simba ductile simbi uye yakagadzira simbi, uye inorapwa nepamusoro pekusimbisa tekinoroji yekuvandudza kuneta simba kweye crankshaft. Iyo inokodzera mota, ngarava, mainjiniya mota, michina yekurima, jenareta set, yepakutanga mhando, ine chitarisiko chakanaka, kukwirira kwakanyanya, kutsetseka, kupenya nekusimba mushure mekupedza. Chigadzirwa chimwe nechimwe chakaedzwa zvakaomarara uye hunhu hwayo hwakavimbiswa. Bhokisi kurongedza rine chitarisiko chakanaka uye rakasimba kugadzirwa kutenderera: 20-30 mazuva ekushanda, kwazvakarerekera kurongedza / kwepakutanga kurongedza, nzira yekutakura: ivhu, gungwa nemhepo.
Yakakwira mhando mota crankshaft yeToyota2RZ
Mhando dzemotokari dzinoshanda: Toyota2RZ
Basa re crankshaft counterweight (inonziwo counterweight) kutenderedza simba rinotenderera re centrifugal uye torque yayo, uye dzimwe nguva inogona zvakare kuyananisa iyo inodzora inertial simba uye yayo torque. Kana masimba aya nenguva zvadzikama pachezvazvo, iyo inorema inogona zvakare kushandiswa kudzikisa mutoro pane yakatakura. Huwandu, saizi uye kuiswa kweanoremerwa kunofanirwa kutariswa zvinoenderana nezvinhu zvakaita sehuwandu hwesirinda yeinjini, humburumbira kurongeka uye chimiro checrankshaft. Iyo counterweight inowanzo kuve yakabatanidzwa ne crankshaft nekukanda kana kuumba. Iyo yepamusoro-simba dhiziri injini counterweight inogadzirwa zvakasiyana kubva kune crankshaft uye ndokuzobatanidzwa pamwechete.
Yakakwira-mhando mota crankshaft, yakakodzera Toyota 2RZ, yepakutanga fekitori mhando, gore rimwe garandi. Iyo yakakwana mushure mekutengesa sevhisi system inokupa iwe technical technical.Gamuchira vatengi vekumba uye vekunze kubvunza nekushanyira fekitori yedu.
Yakajairika mota yemotokari crankshaft yeToyota1Y
Mhando dzemotokari dzinoshanda: Toyota1Y
Ductile simbi crankshaft kutenderera kona kukona kusimbisa kunozoshandiswa zvakanyanya mu crankshaft kugadzirisa. Uye zvakare, michina yekusimbisa michina senge yakakomberedza kona kumonera kusimbisa pamwe nejenali pamusoro kudzima ichazoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa crankshaft. Yakagadzirwa simbi crankshaft yekusimbisa nzira ichave yakawanda Iyo pasi inodzimwa nejenali uye yakakomberedzwa makona.
Iyo kambani ine advanced technology uye yakazara kuongorora uye kuyedza michina. Kutanga muindasitiri kupasa ISO9001-2000 uye TS16949: 2009 yemhando system chitupa. Izvo zviripo zvakagadziriswa zvinhu zviri mamirioni zana nemakumi mashanu emari. Parizvino, kambani inovhara nzvimbo ye20,000 mativi emamirimita, chivakwa nzvimbo ye28,000 mativi emamirimita, vashandi ve180, anopfuura 200 seti yekugadzirisa uye yekuyedza michina, 2 simbi muforoma jecha-yakavharwa yekukanda mitsara yekugadzira, uye 4 machine kugadzirwa mitsetse. Maitiro ekugadzira uye nzira dzekuyedza zvinoteedzera zviyero zveGerman
Kunakisa crankshaft yeToyota1FZ
Mhando dzemotokari dzinoshanda: Toyota1FZ
Crankshaft ndechimwe chezvinhu zvakajairika uye zvakakosha zvikamu zveinjini. Basa rayo kushandura gasi kumanikidza inopfuudzwa ne crankshaft yekubatanidza tsvimbo kuita torque, iyo inoshandiswa sesimba rekuburitsa basa, kutyaira mamwe mashandiro ekushanda, uye kutyaira anobatsira michina yeinjini yemukati yemoto kuti ishande. Izvi zvinoreva kumhanyisa kumhanyisa uye kudzikisira, kuchiperekedzwa neakakwira kukotama deformation, yakakwira torque uye vibration kukanganisa, zvichikonzera kwakanyanya uye kwakasiyana kusagadzikana. Kushushikana kwakadai kwakanyanya kunoda dhizaini yekuchengetera uye kuverenga, kusarudzwa kwezvinhu zvakafanira uye batch yekugadzira tekinoroji.
Kune crankshafts inogadzirwa muhuwandu hwakawanda, kuitira kuti ivandudze mhando yechigadzirwa, iyo nitrogen-yakavakirwa mhepo gasi nitrocarburizing yekugadzira tambo inodzorwa ne microcomputer ichagamuchirwa mune ramangwana. Nitrogen-yakavakirwa muchadenga gasi nitrocarburizing yekugadzira tambo inoumbwa neyemberi yekuwachisa muchina (kuwacha uye kuomesa), preheating choto, nitrocarburizing vira, kutonhora mafuta tangi, kumashure yekuwachisa muchina (kuwacha nekuomesa), kutonga system uye gasi kugovera uye mamwe masisitimu.
Kubvira payakagadzwa, kambani iyi yanga ichiomerera kubhizimusi mutemo we "kuvimbiswa kwemhando yepamusoro, mukurumbira-wakavakirwa, sevhisi yakatendeseka, uye kubatsirana", uye yakatsaurirwa kutsvaga kufambira mberi pamwe nekufambira mberi kwevatengi vedu, uye nekutenda kwechokwadi kushamwari kubva kumatunhu ese yehupenyu vane refu-rutsigiro uye vane hanya nekambani!
Maodzanyemba eZongshizhuang Village, Zongshizhuang Town, Jinzhou City, Shijiazhuang City, Hebei Province